Budada Guggulsterone (95975-55-6) hplc = 98% | AASraw R & D Reagents
/ Products / R & D Reagents / Budada Guggulsterone
SKU: 95975-55-6. Category: R & D Reagents
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga budada Guggulsterone (95975-55-6), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Guggulsterone video budada ah
Dufanka Guga Guggulsterone Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Budada Guggulsterone
Formula kelli: C21H28O2
Miisaankani waa: 312.45
Dhibcaha Biyaha: 170-171.5 ° C
Color: budo huruud Light
Rood Guggulsterone budada loo isticmaalo
Dhadhaab, Balsamodendrum Wightii, Balsamodendrum Qulul, Qalabaynta Badeecadda, Gomme Guggul, Gomme-Résine de Guggul, Guggal, Guggul Gum Resin, Guggul Lipids, Guggulipid, Guggulipide, Guggulu, Guggulu Suddha, budada Guggulsterone
Isticmaalka budada guggulsterone
Budada Guggulsterone waa phytosteroid oo laga helo rinjiga geedka guggul, Qaybta Qandhada. Budada Guggulsterone ayaa jiri kara midkood laba ka mid ah stereoisomers, budada E-Guggulsterone iyo budada Z-Guggulsterone. Bini'aadanku, waxay u dhaqmaan sida antagonist ee xajiyaha xayawaanka X, kaas oo markii hore la rumaysan yahay in ay sababtay hoos u dhigista dufanka "cholesterol" ee beerka. Daraasado dhowr ah ayaa la soo daabacay oo muujinaysa in guud ahaan hoos u dhac miisaaniyamku uu dhaco iyadoo la isticmaalayo qiyaaso kala duwan oo ah budada Guggulsterone, iyo heerarka lipoprotein hooseeya ("kolestarool xun") oo kordhay dad badan. Si kastaba ha ahaatee, budada Guggulsterone waa qayb ka mid ah waxyaalo badan oo nafaqo leh.
Hindiya, Bangladesh, iyo Pakistan, ayaa loo isticmaalay in lagu daaweeyo cuduro kala duwan oo ay ka mid yihiin hyper-cholesterolemia, atherosclerosis, rheumatism, iyo cayilka badan dhowr kun oo sano. Budada Guggulsterone oo laga soocay guggul ayaa loo aqoonsaday inuu yahay xubin firfircoon oo mas'uul ka ah saameynta daaweynta guggul. Tan iyo markii daraasaddii ugu horreysay ee muujinaysa saameynta daaweynta guggul ee xayawaanka xoolaha ee 1966, waxaa la sameeyay baaritaanno tiro badan oo takhasus ah. Inkasta oo khilaafka naqshadeynta daraasadda, tayada habraaca, falanqeynta tirakoobka, cabbirka saamiga, iyo mawduuca dadku ay keenayaan isbeddelada qaarkood ee jawaab-celinta daaweynta, xogta is-biirsaday ee daraasadaha farsamada, baaritaanka, iyo daraasadda ayaa si wayn u taageeraya sheegashada daweynta ee guggul lagu qeexay qoraagii hore Ayurvedic. Si kastaba ha ahaatee, daraasadaha caafimaadka mustaqbalka ee cabbirka weyn iyo muddada dheer waxaa looga baahan yahay inay xaqiijiyaan sheegashooyinkaas. Faa'iidooyinka wadnaha ee daaweynta waxaa laga soo qaatay falalka fayodhowrka ee badan ee la xiriira guggul ama guggulsterone budada, gaar ahaan hypolipidemic, antioxidant, iyo hawlaha antiinflammatory. Waxaa la aasaasay in budada Guggulsterone uu yahay antagonist oo ku jirta xayawaanka xayawaanka xayawaanka (FXR), oo ah xakameyn muhiim ah oo loogu talagalay ilaalinta kolestaroolka iyo xajmiga xayawaanka ee guriga homeostasis. FXR-ku-abuurista budada Guggulsterone ayaa loo soo jeediyay inay tahay farsamo loogu talagalay saameynta hypolipidemic. Daraasad dhowaan ayaa muujinaysa in budada Guggulsterone ay kor u qaadaan mashiinka dhoofinta dhuxusha (BSEP), gaadiidka ka masuulka ah ee mas'uulka ka ah saaridda metaboloolada kolestaroolka ah, xiniinyaha xitaa beerka. Dareerida noocan oo kale ah ee BSEP ee lagu muujiyo budada Gugguloneone waxay jecel yihiin dheef-shiid kiimikaad sarreeya oo ku jira xitaa acids, sidaas awgeedna waxay u taagan tahay qaab kale oo suurtagal ah oo ku saabsan waxqabadka hypolipidemic. Budada Guggulsterone ayaa lagu ogaadey in si xakameysan loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa nukliyeerka-kappaB (NF-kappaB), oo ah xakameyn culus ee jawaabaha bararka. Cadaadiska noocaas ah ee hawlgalka NF-kappaB by budada Guggulsterone ayaa loo soo jeediyay sidii farsameyn ah saamaynta antiinflammatory ee budada Guggulsterone.
Maxay Yihiin Qaar ka mid ah Calaamadihiisu?
Waxay iigu macnaysay in haddii qofku uu isku dari karo saamaynta gubitaanka ee hoormoonka tayroodhka ee hoormoonka tayroodhka ee hoormoonka adrenergic (tusaale, adrenaline) wax aad u dhicin. Sidoo kale, xiiso waa xaqiiqda ah in noocyada ECA noociisa ay u muuqdaan in ay yareeyaan qiyaasta hoormoonka tayroodhka ku wareega dhiigga waqti ka dib. Noocyada Guggulsterone waxay qabtaan shaqo weyn oo la xakameeyo hoos u dhigiddan, sidaas oo ay ilaalinayaan dhammaan hababka gubashada dufanka jirka ee ku shaqeeya heerka ugu sarreeya.
Siyaabaha kama dambeyska ah ee budada Guggulsterone ayaa ka faa'iideysan kara dagaalka lagaga gubi karo dufanka ku jira cuntooyinka ketogenic iyo hormoonka koritaanka. Waqti ka dib, cuntooyinka ketogenic waxay u muuqdaan inay yareeyaan waxtarka tayroodhka ee yaraynta is-beddelka T4 ilaa awoodda xoogan ee T3. Sidoo kale, halkaas oo budada Guggulsterone maalin walba loo qaato bilaha 3, waxay soo saareen hoos u dhac ku yimaada dhaawacyada inta badan bukaannada. Iyada oo tetracycline, hoos u dhac ku yimi dhaawacyada caabuqa wuxuu ahaa 65.2% marka la barbar dhigo 68% la budada Guggulsterone. Sida aad u arki karto, saaxiibkeena Guggul waa mid aad u awood badan oo la dagaallama finna.
Yaa ka faa'iideysan kara tan? Hmmm !!! Waa hagaag, illaa inta aan sheegi karo, ku dhawaad ​​qof walba. Ma jiro qof keliya oo aan ogahay inaan jeclaan laheyn cilad fiican. Tani waxay si gaar ah u tahay kuwa ku jira stabdhabyada anabolic / androgenic ah kuwaasi waxay u muuqdaan inay kordhinayaan hoos udhaca maqaarka iyo suuragalnimada finanka. Aan sheegno - qofna kuma qoslin Mr Huggulee Guggulee! Xaqiiqdii, waxaa laga yaabaa in uu leeyahay magac funny ah laakiin buugaydu waa halyeey. Halkee kale ayaad ka heli kartaa xariif ah oo kaa caawinaysa inaad lumiso dufanka, hagaajiso qiyaastaada dufankaaga, isla mar ahaantaana hagaajisid xajintaada? Waxaan u muuqday mid dheer oo adag waxaanan weli raadin hal xitaa tartan.
Immisa waa in la Qaadaa?
Miyuu Wax Dhici Karaa?
Haa! Ka hor inta aan iloobin, qiyaasta mid waa inay qaadataa waa 30-60mg saddex jeer maalintii cuntada.
Had iyo jeer xasuuso inkasta oo aad ka heli karto badeeco ay ku jirto awoodda sare ee dabiiciga ah Guggul! Taladayada kama dambaysta ah ayaa ah inaan baxo oo aan helo ninkaan, ruxin gacantiisa, ka dibna u goynaya kooxda faa'iidooyinka uu keeno.
Digniin ku saabsan budada Guggulsterone
Rijin huruud ah oo laga soo saaro guggul guggul wuxuu ka kooban yahay walxo la yiraahdo budooyinka Guggulsterone iyo suurtogal kale. Daraasad shaybaadh ah ayaa lagu ogaaday in budooyinka Guggulsterone ay bedeli karaan dheef-shiid kiimikaad ee beerka. Noocyada Guggulsterone ayaa sidoo kale kordhin kara wax soo saarka hoormoonka tayroodhka waxaana badanaa lagu daraa miisaanka luminta khasaaraha ee ujeedadaas. Waxyaabaha ku jira xayawaanka cagaaran waa in lala socdaa taxaddar sababta oo ah khatarta ay leedahay dhibaatooyinka soo raaca.
Kumanaan sanadood, reag guggul ayaa loo isticmaalay daawada dabiiciga ah si loo daaweeyo laabotooyinka, xuubka, cudurada dareemayaasha, dhiig karka, cudurada kaadida iyo cudurrada maqaarka. Dawada casriga ah waxay heshay caddayn ah in budhaha Guggulsterone ay ku dhaqmi karaan beerka, hagaajinta cudurrada dheef-shiid kiimikaad hooseeya sida kolestaroolka sare. Iyadoo la adeegsanayo hab aan la garanayn, budada Guggulsterone waxay sidoo kale kordhisaa soosaarka qanjidhada ee qanjidhada hoormoonka, kordhinta tamarta jirka ee jirka.
Soo saaridda Guggul waa in aan lagu qaadin warfarin, aspirin, daawooyinka aan anti-inflammatory ahayn ama daawooyinka kale ee joojiya dhiig-xinjirowga. Soo-saarista Guggul waxay kordhin kartaa halista dhiig-baxa daran ama aan la xakameynin marka la qaato daroogooyinkaas. Soo-bixinta Guggul waxay la-xiriiri kartaa hoormoonka tayroodhka ee loo yaqaan 'thinoid hormones' ama daawooyin kale oo loo isticmaalo daaweynta cudurka qanjirka 'thyroid'. Isku qaadka, daawooyinka giriiga iyo daaweynta tayroodhka ayaa kordhin kara khatarta duufaanka tayroodhka ah, xaalad halis ah oo nafta halis galineysa kaas oo lagu soo saaro qiyaas aad u tiro badan oo hoormoonka tayroodhka ah. Extract Guggul ayaa si weyn u yareeyn kara waxtarka daawada propranolol ama diltiazem.
Kuwa lagu daaweeyo jirrooyinka thyroid, oo ay ku jiraan hypo- iyo hyperthyroidism, waa in ay la tashadaan dhakhtarkooda ka hor inta aan la qaadin kalluunka gugul. Dadka qaba xanuunka beerka ama kelyaha ayaa laga yaabaa inaanay si caadi ah u naqshadeeynin guggul guggul si caadi ah mana aha inay qaataan. Guud ahaan, la tasho dhakhtarkaaga si loo go'aamiyo in hektalku uu badbaado kuu yahay.
Waxyaabaha kale ee Saameyn Karta
Macluumaad cilmi ah oo yar ayaa ka jira siyaalaha laga yaabo in sunta qamriga laga qaado. Ma oga in guggul uu badbaado u yahay xilliga uurka, laakin sababtoo ah saameyn ku yeelashada hoormoonka tayroodhka iyo dheef-shiid kiimikaadka waa in laga fogaadaa. Guggul laga soo qaado ayaa sababi kara madax-xanuun, lalabo, boogo-xanuun iyo finan yaryar. Dareenka xasaasiga ah ee soo-saarka guggul-ka ayaa la soo sheegay.
Dufanka Guggulsterone waa shaybaar balaadhan oo hormoon ah oo hormoono hormone ah, waxaana loo yaqaanaa inuu lahaado waxqabadyada soo socda:
Argagixisada xasaasiyadeed ee mineralocorticoid (Ki = 39 nM)
Qalabaynta Progesterone Qeybta Cunnada (Ki = 201 nM)
Argagixisada xasaasiyadeed ee Glucocorticoid (Ki = 224 nM)
Dhiig-xakameenta xasaasiyadeed ee Androgen (Ki = 240 nM)
Cudurka Estrogen agonist (Ki> 5 μM; EC50> 5 μM)
Farneso X Reactor Counter (IC50 = 5-50 μM)
Pregnane X reseptor agonist (EC50 = 2.4 μM ((Z) -isomer))
Budada Guggulsterone waxaa laga helay cilmi baaris xayawaan ah si ay u noqoto mid firfircoon; waxay leedahay sharuudo buuxda oo ah 42.9% ka dib markii maamulka afka laga qaato jiirka, iyada oo nus-nus ah oo ku saabsan saacadaha 10 ee noocyadaas, oo tilmaamaya astaanta farmashiyaha.
Guggulsterone Root Powder
Suuq-geynta Shirkadda Rug Guggulsterone
Sida loo iibsado budada Guggulsterone ee AASraw
Guggulsterone Rootiga Rootiga ah:
Guggulsterones (guggul) oo ah miisaan lumis iyo jir-dhis
Kortexolone 17a-propionate budada
Monomethyl auristatin E (MMAE) budada